national assembly Archives – Nehanda Radio
Presidential spokesperson George Charamba has claimed that the National Assembly "is out of order" for pushing his boss Emmerson Mnangagwa to appoint a second Vice President. Charamba called all Members of Parliament agitating for Mnangagwa…
There were chaotic scenes in Parliament as newly elected Citizens Coalition for Change (CCC) MPs were denied entry into the building for wearing yellow ties. They still managed to bulldoze inside.
Mwonzora recalls Khupe from Parliament
Feb 4, 2022 39,790
Khupe had been initially suspended from the MDC-T on grounds of “bringing the party into disrepute” but she immediately announced that she was breaking away as Mwonzora had become a “center of constitutional transgressions.”
Jan 26, 2022 49,987
MPs complain that ministers are snubbing Parliament ‘question and answer sessions’
Nov 12, 2021 21,452
MPs in Zimbabwe have protested against some cabinet ministers who are continuously not coming to the National Assembly to attend to pertinent questions that people need answers to.
Oct 1, 2020 27,323
Jul 29, 2020 19,886
Dec 5, 2019 38,249
Zanu PF and MDC Alliance MPs on-going squabbles over President Emmerson Mnangagwa’s legitimacy saw chaos revisiting the National Assembly yesterday, paralysing debate on the 2020 national budget.
Oct 24, 2019 31,328
There was drama in the National Assembly yesterday, which resulted in Zengeza West MP Job Sikhala (MDC Alliance) losing his temper and angrily labelling the Speaker of the National Assembly Jacob Mudenda “a dictator”, adding that he was…
Jul 5, 2022 46,691
Jul 5, 2022 15,752
Jul 5, 2022 80,535
Jul 5, 2022 26,636